Tun Tun's Photo Diary: August 2014
ဒါက တော့ ဒီမော်ဒယ် ၂ယောက်ရဲ. နောက်ထပ် ရေကူးဝတ်စုံ လဲ ပြီး ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယ ၀တ်စုံနဲ. ရိုက်တဲ့ အချိန်မှာ နေ.လည် ၁၁နာရီလောက် ဖြစ်နေတော့ နေအရမ်းပူနေတော့ ဓါတ်ပုံရိုက်ရတာ သိပ်အဆင်မပြေဘူး။ မော်ဒယ်တွေက တော်ပါတယ်။ နေပူထဲမှာလဲ အပြုံးမပျက်ဘူး။
အရင်တင်ထားတဲ့ ပို.စ် တွေကို ဒီမှာ Portrait Photography #8 ၊ Portrait Photography #7 ကြည့်လို. ရပါတယ်။ Singapore မှာ outdoor portrait ရိုက်မယ်ဆို၇င် နေ.ခင်း ဘက်ဆို ၁၀နာ၇ီ လောက်ထိ ဒါမှမဟုတ် ညနေပိုင်းဆို ၄နာ၇ီကနေ ၆နာ၇ီ လောက်ထိ အရမ်းမပူတဲ့ အချိန်တွေ မှာ ရိုက်ရတာ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ အလင်းရောင် အရမ်းမပြင်းတော့ Lighting အနေနဲ.လဲ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပြီးရင် မလေးရှားနိုင်ငံ Johor Bahru ဘက်ကို ၂ညအိပ် ၃ရက် ခရီး သွားခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို တင်ပါ့မယ်။
ွှThis is the another set of photos of this two models with another swimsuits. At that time, it was about 11 pm and too sunny. Even though it was so hot, these two model never failed to put beautiful simile on their face. You can also see their previous posts @ Portrait Photography #8 ၊ Portrait Photography #7.
at 8/23/2014 06:53:00 AM Links to this post No comments:
at 8/19/2014 07:25:00 AM Links to this post2comments:
at 8/14/2014 06:59:00 AM Links to this post No comments:
I went to eat this Korean BBQ with my colleagues on one fine evening. The shop is located at Toa Payoh Safra, not very far from Toa Payoh MRT station. It is something like buffet, but you have to order BBQ meat within 1 hour (plate by plate). After that one hour, you may still can sit down and chit chat at the shop but cannot order any food :)
In my opinion, some of the BBQ meats are not really tasty. The way they marinate the meat is not rich in flavor. I guess some of them are just raw meat and it is really not taste at all. Beside BBQ meats and some Korean salads, it also serves free flow Korean drink like Ice tea which is also taste wired because it only has aroma in it but don't have any taste/sugar like other soft drinks. May be they serve healthy foods which is not my type. :)
It costs about S$20 per person. For its standard, it is not really expensive but I would top upafew more bucks to eat at Seoul Garden.
at 8/12/2014 08:45:00 AM Links to this post No comments:
Labels: Food, Korea, Korean Food, Singapore Food
နေ.လည်စာ စားပြီးတော့ ကျွန်တော်တို.ကို နောက်ထပ်ခေါ်သွားတဲ့ နေရာက အင်ဒိုနီးရှား ရိုးရာ အိမ်ပုံစံ လေးတွေ လုပ်ထားတဲ့နေရာပါ။ မြန်မာ လို အခေါ်ဆို၇င် တိုင်းရင်းသားကျေးရွာလိုမျိုးပေါ့။ မြန်မာပြည်က တိုင်းရင်းသားကျေးရွာက အိမ်ကတော့ တကယ် နေလို.ရတဲ့ အိမ်ပါ။ ဒါကတော့ အရုပ်လို ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်သေးသေးလေးပါ။ သိပ်အများကြီးမဟုတ်ပါဘူး အလွန်ဆုံးရှိလှ ၁၀ အိမ်လောက်ပေါ့။
After having lunch, the bus sent us to the place where miniature of traditional houses are located. There is about 10 houses in this place.
at 8/08/2014 08:24:00 AM Links to this post 1 comment:
Labels: Batam, Food, Indonesia
at 8/03/2014 12:40:00 AM Links to this post4comments: